Nadiifinta Biyaha & Hawada - Hengshui Jrain Frp Co., Ltd.
Dhawaan markii wacyi gelinta deegaanka ay aad u xoog badantahay oo qawaaniintu ay noqdaan kuwo aad u adag, nidaamyada nadaafadda hawada iyo biyaha waxaa hoos imanaya baahiyo badan.
Ka dib buufiska iyo maydhashada masraxa badan, oo ay weheliso geedi socodka kiimikada, qalabka ilaalinta fiberglass ee deegaanka la xiriira ayaa xamili kara gaasas badan oo waxyeello leh iyo dareeraha sida mashiinka acid-ka, khaldan HCL, khashinka chromic acid, aashitada nitric acid, khaldan acid fosfooraska, hydrofluoric acid ceeryaamo, chloride hydrogen, hydrogen fluoride, hydrogen sulfur, hydrogen cyanide, acid wasakh, alkali, emulsion, nickeliferous effluent, solvent organic, foloraydh dabiici ah, iwm.
Qalabka la xiriira dhowrista deegaanka ee Fiberglass inta badan waxaa ka mid ah laakiin aan ku xaddidnayn kuwa dheef-shiidka, haamaha keydinta ee cabitaanno fara badan, maraakiibta xoqidda, nuugista, maraakiibta biofiltration, reactors, Venturi, daboolka xakameynta ur, tuubooyinka lagu buufiyo, tuubbada anode ee WESP, tasiilaadka cilmiga noolaha ee dhirta inta badan waxaa lagu dacweeyaa dhirta qallajinta, iwm. Halabuurka waxaa lagu waafajin karaa nooca gaaska iyo dareeraha u baahan in la daaweeyo.
Waxay aad ugu jecel yihiin warshado badan sida daaweynta biyaha, qashinka qashinka khatarta ah ee warshadaha, injineernimada deodorization, nidaamka qulqulka bayolojiga, daaweynta gaaska, tamarta nadiifka ah, suuqyada biogas, nidaamka xakamaynta ur, nidaamka FGD, nidaamka WESP iyo wixii la mid ah. Sababta oo ah alaabooyinka loo yaqaan 'fiberlasslass' waxaa soosaaraya:
Caabiga Corrosion; culeys fudud & awood sare; iska caabbinta heerkulka sare & dabka dib u soo kabashada; anti-gabowga iyo iska caabbinta UV; korantada iyo kuleylka kuleylka & cufnaanta baahinta; saamiga qiimaha oo tayo sare leh iyo wixii la mid ah.
Xaqiiqda ah in badeecada Jrain si balaaran loo geyn karo oo loo sameyn karo codsi gaar ah ee habka wax soo saarka loogu talagalay qulqulka la siiyay ama nooca wasakheynta.
Jrain waxay adeegtaa nidaamka nadiifinta hawada iyo biyaha oo ay weheliso badeecooyinkeeda kala duwan ee loo yaqaan 'fiberlasslass' iyadoo ku saleysan awooddeeda ay ku daboolan karto shuruudaha macmiisha-gaar ah.
Mashaariic isku dhafan ama taxaddi badan oo ka gudba kan caadiga ah waa kuwa Jrain ay ku farxi laheyd inay daryeesho adiga.
Alaabada Jrain waxay leeyihiin saamiga qiimaha oo tayo sare leh, taas oo ka dhigaysa inay si gaar ah u soo jiitaan.
Fiberlass-ka Farsamaysan, Caaryada, Mashiinka Dabaysha Fiberglass, Mashiinka Dabaysha ee GRP, Dhoolatus gacmeed, Mashiinka Dabaysha ee FRP,